Gini mere eji eji Drupal? | Martech Zone
M jụrụ n’oge na-adịbeghị anya Kedu ihe bụ Drupal? dị ka ụzọ ịmebata Drupal. Ajụjụ na-esote n'uche bụ "M Kwesịrị iji Drupal?"
Nke a bụ nnukwu ajụjụ. Ọtụtụ oge ị hụrụ teknụzụ na ihe gbasara ya na-akpali gị iche echiche banyere iji ya. N'ihe banyere Drupal ị nwere ike ịnụ na ụfọdụ weebụsaịtị mara mma na-agba ọsọ na usoro njikwa ọdịnaya a mepere emepe: Grammy.com, WhiteHouse.gov, Symantec Jikọọ, Na Onye nlele New York, ịkpọ aha ole na ole (ọzọ Drupal eji ebe a ọmụmụ ihe na Drupal.org)
Ma gịnị kpatara Drupal? Enwere ike ịtọ saịtị ndị dị n'elu WordPress, Joomla!, ma ọ bụ DotNetNuke?
Ihe kpatara nzukọ ji eji drupal
Community nke mmepe bụ ike na aku. Modul enyere bụ isi nri maka Drupal. Ngwa ndị a nyere aka, nke ọtụtụ puku mmadụ mere, gbasaa arụmọrụ nke Drupal iji nyere aka mezuo ihe achọrọ karịa isi Drupal. Taa, ihe karịrị 5000 nyere modulu maka Drupal 6 (nke ugbu a). Ndị nyere aka na modulu ndị a na-arụkwa ọrụ n'ime ka Drupal ka mma ma baa uru site na imepụta nsụgharị Drupal ọzọ. Drupal 7, dị nnọọ ewepụtara Jenụwarị 5, 2011, nwere nkwalite iji mee ka Drupal dị mfe itinye, kwado, na ịzụlite oge. Drupal 8 na-agbanyekwa atụmatụ iji mee ka Drupal ka mma.
E nwere usoro okike azụmahịa nke Drupal dị adị. Dika oru mepere emepe, ulo oru di ire na oganihu etolitela na Drupal. Nke a pụtara na e nwere ụlọ ọrụ na-emepe saịtị weebụ yana sistemu jikọtara ya na Drupal iji kwado mkpa nke ndị ahịa ukwu na obere. Nke a pụtakwara Drupal nke ọma mgbe nsogbu siri ike chọrọ azịza siri ike. Companieslọ ọrụ ihe atụ na-enye ngwaahịa / ọrụ Drupal gụnyere Lullabot (ịgba izu na ọzụzụ), Acquia (ọkachamara na nkwado na nkwado), Na-adọ: // Technology (ahaziri ahaziri, nkesa Drupal obodo, ịgba izu), Volacci (Drupal SEO), na Palantir.net (imewe na mmekọrịta). Ọtụtụ, ọtụtụ ndị ọzọ dị na Ahia Drupal.org.
Nzukọ Drupal na-eme mgbe niile na-eme n'akụkụ ụwa dum. Enwere ndị mmadụ ịgakwuru mgbe achọrọ ndị ọkachamara. Na onye meetups na-eme kwa mgbe n'ọtụtụ obodo buru ibu na gburugburu ụwa. Na mgbakwunye, dum Drupal na-ezukọ n'oge DrupalCon. Ihe a na-eme kwa afọ (North America na EU, na-agbanwe) na-ezukọta ihe karịrị 3000 ndị mmadụ iji tụlee, mụta, kuzie, chọpụta ma nwee anụrị gburugburu Drupal.
Ndị ọrụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ kwadoro Drupal. Drupal anatawo nkwado site na: Google, n'okpuru ya Oge mmemme nke Usoro, iji nyere aka gbasaa ọrụ Drupal na atụmatụ; ihe John S. na James L. Knight Foundation nyere onyinye iji kwalite echiche nke ibipụta ọdịnaya nke ọma na ịntanetị; Sony Music nyere ndị otu raara onwe ha nye aka iji gbasaa Drupal ma nyekwa aka nkwalite ndị ahụ na obodo Drupal; na Thomson Reuters nyere aka ịzụlite na ijikọ ọnụ Calais n'ime Drupal iji nyere aka ịgbatị usoro ọmụmụ asụsụ, websaịtị eji eme ihe.
Drupal abụghị naanị otu ngwanrọ nke enwere ike ibudata ma nwalee. Ọ nwere ezigbo ndị mmadụ metụtara, na-edozi ezigbo nsogbu, ma na-arụ ọrụ iji mee ka web, ozi, na teknụzụ dị mfe maka ndị ọzọ. Nke a pụtara na enwere ndị ị nwere ike ịgbanye iji nyere aka mee ka weebụsaịtị gị ka mma.
Tags: ọdịnaya managementusoro njikwa ọdịnayaDrupalmmepe drupaldrupal infographicakụkọ ihe mere eme nke drupalintro ka drupalkedu ihe drupalgịnị kpatara iji drupal
@trufflemedia - M na-ele Drupal anya dị ka ihe dị mma maka ikpo okwu netwọkụ mmekọrịta karịa saịtị ma ọ bụ ọdịnaya blog. Maka nke ahụ, WordPress bụ ọkacha mmasị m (n'onwe ya). Echiche?
Doug, ị maraworị na m nọ n'aka gị na WordPress bandwagon maka CMS & blọọgụ. Anyị nwere ndị ahịa na-eji ma ọ bụ jiri Drupal na Joomla & nkwenye n'etiti ha abụwo mgbe niile na WordPress dị mfe iji. N'eziokwu, Drupal nwere elele n'ọnọdụ ụfọdụ, mana ndị ahụ dị ole na ole ma dị m iche.